दक्षिणा पाउनुभयो ! अब यसो गर्नुस्, नत्र कारबाहीमा परिएला – Khabarkhoj
खबरखोज सम्वाददाता	। २०७८ आश्विन २९, शुक्रबार १६:१७
दसैँमा टीकाको जति महत्त्व छ, त्यति नै दक्षिणाको पनि । ठुलाबडाको हातबाट आशीर्वाद टीका ग्रहण गरिसकेपछि दक्षिणाको रूपमा नगद पैसा पाइन्छ । जुन तपाईँले पनि पाउनुभयो होला । वा पाउँदै हुनुहुन्छ । याद गर्नु होस्, अब तपाईँले पाउने पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने ? नोटको सुरक्षा गर्न नोटलाई सकभर वालेट वा पर्समा नपट्याईकन राख्नुहोस् । सकभर नोटमा कुनै पनि प्रकारको रङ नदल्नुहोस् । नोटमा जथाभाबी &not;लेख्ने, केरमेट गर्ने वा स्टिच गर्ने पनि नगर्नुहोस् । नोटलाई जलाउने वा च्यात्ने जस्ता गैर ऐन विपरीतका काम झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् ।
प्रतिभा ऐडि/ कालिकाेट । लगातारको वर्षाले गर्दा बाली नाली मा ठुलो क्षेति पुर्याएको छ। दसैँको टीका थापेर बालीनाली भित्र्याउने तरखर मा जुटेका कालिकोटका किसानहरु आइतबार बाट लगातार परेको बर्षाका कारण किसान हरु निकै चिन्तित भएका छ्न्न। लगातारको वर्षाका कारण खेतमा काटेको धान समेत खेत मै रहेको रास्कोट नगरपालिका वडा नं.२निवासी […]
२०७७ कार्तिक २६, बुधबार ०७:०९
ओली–प्रचण्डबीच जुट्यो सहमति,नेकपाकाे संकट समाधानतिर
२०७७ श्रावण २५, आईतवार १६:२८
कर्णाली प्रदेशमा नौ जना कोरोना संक्रमित थपिए